Xukuumada oo baadhaysa caruurta iskuulka ka maqnaada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
بررسی بیشتر مدارس خصوصی بزرگسالان
Xukuumada oo baadhaysa caruurta iskuulka ka maqnaada
La daabacay tisdag 8 september 2015 kl 12.00
Dawladda waddanka hogaamisa ayaa dhowaan bilaabaysa baadhitaan ku saabsan caruurta wakhtiga dheer iskuulka ka maqnaada. Baadhitaan hore arrinkan laga sameeyay ayaa sheegay in tiro gaadhaysa 600 caruur iskuulka ka maqnaayeen muddo gadhaysa, amba ka dheer sannad dugsiyeed.
Baadhitaanadan ayaa ah qaar iskuulada laga sameeyay 6 amba 7 sanno ka hor.Kuwan ayaa berigaas sheegay in 1 650 caruur iskuulka ka maqnayeen muddo ka dheer bil, iyo in 600 oo caruur iskuulada laga waayey wakhti ka dheer 6 bilood.
Gustav Fridolin, wassirka waxbarashada, ayaa jidhi in dhowr tirokoob sheegeen in tiradanis sii kordhi karto.
- Waan ku guul dareeysanay arrintan.Caruurtani wa in ay kalsooni ku qabaan iskulkooda iyo waxbarashadooda,ayuu sheegay Fridolin.
Sababta ay caruurtani iskuulka uga maqanyihiin ayaa kala duwan. Hasayeeshe wakaaladda waxbarashada ee skolverket ayaa filaysa in ay sababtu xidhiidh la leedahay in ay caruurtani iskuulka kalsooni ku qabin, in la aflagaado oo lugu jidhaahdo in anney wax fahmeeyn.
In gurigooda lugu cadaadiyo ayaa ahaan karta sabab kale, iyo in macallimiinta iskuulka caruurtan taageerin, waa sidey skolverket hore baadhitaankooda uga sheegtay.
Skolverket ayaa xilligii guga sannadkan baadhay 70 arrimood oo ka hadlaya caruur iskuulkoodi ka maqnaaday. Halkan ayaa degmooyinka waddanka iyo iskuulo halkan ka mid ah dhaleecayn xoog leh loo gudbiyay.
Baadhitaanka ay dawladu dhowaan bilaabi doonto ayaa sii gaar ah u eegaya sababta ay caruurtani iskuulka uga maqantahay,islamarkaas na shaacin doona si arrintan loo xallinayo.